यी जुम्ल्याहाको एउटै पति - रोचक - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
यी जुम्ल्याहाको एउटै पति
- , पर्थ ,
माथि तस्वीरका यी महिलाहरु किन खुसी देखिएका होलान्? सुन्दा चकित पर्नुहुन्छ, यिनीहरु एकै पुरुषलाई विहे गर्न पाएकोमा खुसी साटिरहेका छन्। हो, हामीले देखेसुनेका छौं, जो कोही महिला पनि सौता हुन मन गर्दैनन्। तर, यी यस्ता नमूना जुम्ल्याहा महिला हुन्, जो विगत पाँच वर्षदेखि एउटै पुरुषलाई पार्टनर बनाएर खुसी साटिरहेका थिए, त्यो पनि लुकीचोरी होइन। एउटै बेडमा।
पश्चिमी अस्टेलियाको पर्थमा बस्छन् यिनीहरु। उमेरले ३१ वर्ष लागेका अन्ना र ल्युसी डिसेनिक नामका यी जुम्ल्याहाले युट्युब भिडियोमार्फत् आफूहरुले वर्षौंदेखि एकैजना वयस्कसित लिभिङ टुगेदर गरिरहेका रहस्य सार्वजनिक गरेका थिए। फेसबुकको माध्यमबाट जोडिएको यो सम्बन्धको पाँचौं वर्षगाँठ मनाउने क्रममा यो सत्य खोलेका हुन्। ‘हामी ऊसितको सम्बन्धलाई जीवन्त र स्थायी बनाउन चाहन्छौं,’ पेशागत रुपमा इलेक्ट्रिक इन्जिनियर बेन बिरेनलाई औंल्याउँदै यी जुम्ल्याहाले खुसी साटे।
यता, सहमतिमै एउटै पति ‘सेयर’ गर्न पाएकोमा जुम्ल्याहा प्रेमिकाहरु पनि पुलकित छन्। उनीहरुले आफूलाई प्रेमीले समान रुपमा प्रेम गर्ने गरेको खुलासा गरेका छन्। ‘जब उसले अन्नालाई किस गर्छ, त्यसलगत्तै मलाई पनि किस गर्छ’ ल्युसी भन्छिन्, ‘डेटिङ जाँदा पनि हामीलाई दुबैतिर हातले समाएर हिंड्छन्। हामी उनको दायाँबायाँ हुन्छौं।’
यतिमात्र होइन, उनीहरुले छिट्टै नै बेनको सन्तान जन्माउने सोच बनाएका छन्। यी जुम्ल्याहा आफ्नो हरेक अंग आपसमा समान बनाउन कस्मेटिक सर्जरीको तयारीमा पुगेको बताउँछन्। ‘हामी आफ्ना बे्रस्ट र अन्य बाह्य अङ्गलाई समान र आकर्षक बनाउने भएका छौं,’अन्ना भन्छिन्, ‘किनकी, हामी दुबै प्रेमिका बेनको लागि शारीरिक रुपमा पनि समान लागून्।’
प्रकाशित 2016-12-31 11:21:24
© 2016 Nepalkhabar Pvt. Ltd. | Kathmandu, Nepal, [email protected]